Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Misokatra izao i India ho an'ireo mpizahatany vahiny vita vaksiny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Sambany i India no namela ny mpizahatany vahiny hiditra ao amin'ny firenena nanomboka ny volana martsa 2020 izay nametrahany ny fanidiana voalohany ny virus coronavirus.
Ireo mpitsidika vahiny vita vaksiny feno mandeha amin'ny sidina voatokana dia namela ny hiditra any India manomboka anio.
Ireo mpandeha iraisam-pirenena amin'ny sidina mahazatra dia afaka miditra ao India manomboka amin'ny 15 Novambra.
Tsy fantatra mazava raha toa ka tsy maintsy karasina ny mpizahatany tonga nefa tokony hatao vaksiny feno sy hizaha toetra ratsy ny viriosy ao anatin'ny 72 ora aorian'ny sidina.
Avela hiditra ihany ny mpitsidika vahiny India indray, sambany hatramin'ny volana martsa 2020, rehefa nametraka ny hidim-bolany COVID-19 voalohany ny firenena.
Amin'ny fitsaharana farany an'ny sisiny COVID-19, Tompon'andraikitra amin'ny governemanta Indiana dia nanambara tamin'ny zoma fa nisokatra indray ny firenena ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena vita vaksiny feno izay mandeha amin'ny sidina efa niasa.
Afaka miditra ireo mpandeha vahiny amin'ny sidina mahazatra India nanomboka ny 15 novambra, hoy ny fanampim-panazavana.
Tsy mbola fantatra mazava raha toa ka tsy maintsy hakan-kararantina ireo mpizahatany tonga India, saingy tsy maintsy vaksinina feno izy ireo ary hizaha toetra ratsy ny virus COVID-19 ao anatin'ny 72 ora aorian'ny sidina.
Ny fanapaha-kevitra hanokatra indray ny firenena, nambaran'ny minisiteran'ny trano tany India tamin'ny voalohandohan'ity volana ity, dia nidina latsaka ny 20,000 isan-jato ny areti-mifindra isan'andro India tamin'ny tampon'isa 400,000 tamin'ny volana Mey ary betsaka ny olona vita vaksiny.
India nitantana fatra vaksin maherin'ny 970 tapitrisa. Manakaiky ny 70 isan-jaton'ny olon-dehibe mendrika no nahazo fatra farafaharatsiny.
Ny fanalefahana ny fameperana ireo mpizahatany vahiny mitsidika ny firenena kosa dia mifanindry amin'ny fizahan-tany any India sy ny vanim-potoanan'ny fety. Efa niteraka ny ahiahin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana izay nampitandrina ny amin'ny tsy fahafaham-po.
Tany am-piandohan'ity volana ity, ny filankevitra Indiana momba ny fikarohana ara-pahasalamana, ny sampana mpitsabo voalohany ao India, dia nampitandrina fa ny “fizahan-tany mamaly faty” dia mety hitarika fihenan'ny aretina COVID-19 raha toa ka tsy manaraka akaiky ny fomba fiarovana.
Raha ny angom-baovao ofisialy dia mpizahatany vahiny latsaky ny telo tapitrisa no nitsidika an'i India tamin'ny taona 2020, izay nilatsaka mihoatra ny 75 isan-jato raha oharina tamin'ny taona 2019.